Uchungechunge Lwama-Case Wokubumba
I-New Design 1P, 2P, 3P, 4P, 125A Manual Changeover switch
NJENGOBA (M) -125 ukufakwa kochungechunge kanye nokusebenza kwebhukwana Izimo zokusebenza ezijwayelekile 1.Ukushisa komoya kungu -5 ℃ ～ + 40 ℃, inani elijwayelekile phakathi kwamahora angama-24 akufanele libe ngaphezu kwama-35 ℃. 2.The umswakama isihlobo akufanele singeqi 50% at lokushisa max + 40 ℃, umswakama ephakeme isihlobo kuvunyelwe at aphansi ...
Kungani iZinc oxide Lighting arrester ithandwa?
Isibambi sokukhanyisa iZinc oxide sisetshenziselwa ukuvikela okokusebenza kukagesi kuzo zonke izinhlobo zokweqiwa okubangelwe imisebenzi yokukhanyisa noma yokushintsha. (Umugqa wokubamba wokukhanyisa we-Zinc Oxide usebenzisa) I-Surge arresters isivikeli se-over-voltage esithuthuke kakhulu emhlabeni, esenziwe nge-metal-oxide (MO) ...
Mayelana nohlobo lokuziphilisa lwe-Shunt Power Capacitor
Kunemininingwane ye-B (S) MJ capacitor: Uhlobo Lokuzipholisa I-Shunt Power Capacitor isetshenziswa ku-50Hz noma ku-60Hz uhlelo lwamandla ngokuyinhloko olungcono: factor Isici samandla, △ Nciphisa ukulahleka kwamandla okusebenzayo, △ Amandla we-Improver, △ Nciphisa ukulahleka kwamandla okusebenzayo , Rove Thuthukisa ikhwalithi yamandla kagesi. △ Gubha ubuningi be-transformer ngakho-ke o ...
Idizayini entsha engu-16A iya ku-100A 4P Shintsha okuzenzakalelayo kokushintsha
I-General ASIQ switch switch yamandla amabili (ngemuva kwalokhu ebizwa nge-switchch) ingushintsho olungaqhubeka nokunikezela ugesi uma kunesimo esiphuthumayo. Iswishi iqukethe iswishi yokulayisha kanye nesilawuli, esisetshenziselwa ukuthola ukuthi amandla amakhulu noma okuphakelayo kagesi kuvamile yini. Lapho ama ...
I-KEMA yisifinyezo sesiDashi (Keuring Van Elektrotechnische Materialen). Ububanzi bebhizinisi le-KEMA landa kancane kancane, Futhi laba yisiphathimandla esizimele esiholayo embonini yezinsizakalo zomhlaba wonke. Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-80, KEMA ubelokhu esiza amaklayenti ukubikezela isiqondiso ushintsho futhi s ...
Mayelana ne-Self-healing Type Shunt Power Capac ...
New Design 16A Ukuze 100A 4P okuzenzakalelayo Chang ...